Viola Lift – Novu
A revolutionary body treatment with no pain, no downtime and immediate results seen. It usesamultipolar radio frequency system combined withalow-level laser to tighten skin, promote collagen production within and reduce the appearance of cellulite.
CONSISTENCY — Reduces the appearance of stretch marks.
CONTOUR — Tones and tightens lax skin.
As we age, the connective tissues within the skin breaks down, resulting in wrinkles and other signs of ageing. In addition, collagen production slows down over time as well, causing skin to sage. This multipolar radio frequency treatment is able to penetrate to the different layers of the skin, selectively heating the skin tissues and the collagen fibres up to 41-degrees Celsius. This bulk heating causes the contraction of collagen fibres, resulting in the increased metabolism of fibroblast responsible for the production of new collagen and elastin fibres. The skin is regenerated, more flexible and new skin cells are produced to giveayounger, smoother, healthier and more toned skin.
Skin laxity and/or wrinkled skin
Toning the skin after fat reduction
Maintenance Phase: Once every two weeks to onceamonth
Minimal. Redness may be experienced over the treated area, which should resolve within 30 minutes to an hour after treatment.
နာကျင်မှုကင်းပြီး၊ အနားယူချိန်မလိုသည့် ချက်ချင်းထူးခြားသိသာစေမည့် ခေတ်ရှေ့ပြေး ခန္ဓာကိုယ်ကုထုံးဖြစ်သည်။ အစွန်းစုံရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစနစ်နှင့် အဆင့်နိမ့်လေဆာအား ပေါင်းစပ်အသုံးပြု၍ အရေပြားကိုတင်းရင်းစေခြင်း၊ အရေပြားတွင်းရှိ ကိုလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် cellulite ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချပေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။
အသားအရေညီညာမှု- အကြောပြတ်ရာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို လျော့ချပေးသည်။
ပေါ်လွင်စေမှု- လျော့ရဲနေသောအရေပြားအား အားဖြည့်ပေးကာ တင်းရင်းစေသည်။
အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ အရေပြားအတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ပေးသောတစ်ရှူးများသည် ယိုယွင်းပျက်စီးလာပြီး အတွန့်များနှင့် အခြားသော အိုမင်းမှုလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင် ကိုလာဂျင်ထုတ်လုပ်နှုန်းသည်လည်းအချိန်နှင့်အမျှနှေးလာပြီး အရေပြားအိတွဲကျခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအစွန်းစုံရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကုထုံးသည် မတူညီသောအရေပြားလွှာအထပ်ထပ်အတွင်းသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ လိုအပ်ချက်အလျောက် အရေပြားတစ်ရှူးများနှင့် ကိုလာဂျင်ဖိုင်ဘာများကို 41°Cအထိအပူပေးနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအပူပြင်းပေးခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် ကိုလာဂျင်ဖိုင်ဘာများသည်ကျုံ့လာပြီး ကိုလာဂျင်နှင့် အီလက်စတင်ဖိုင်ဘာ အသစ်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို တာဝန်ယူသော fibroblast ၏ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အရေပြားသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး ပိုမိုအကြမ်းခံနိုင်လာကာ အရေပြားဆဲလ်အသစ်များထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပို၍ ငယ်ရွယ်ချောမွတ်ကျန်းမာသော ကြံ့ခိုင်သည့် အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိစေသည်။
အရေပြားလျော့ရဲခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အတွန့်များဖြစ်ပေါ်နေသော အသားအရေ
အဆီလျော့ချပြီးနောက် အရေပြားကို အားဖြည့်ပေးခြင်း
အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ကုသခြင်းခံယူသောနေရာတစ်ဝိုက်တွင် နီရဲခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ကုသမှုပြီးနောက် မိနစ် ၃၀ မှ တစ်နာရီအတွင်း သက်သာသွားမည်ဖြစ်သည်။